केसीको स्वास्थ्य गम्भीर तर स्थिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
केसीको स्वास्थ्य गम्भीर तर स्थिर
श्रावण ६, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भए पनि स्थिर छ । सरकारले जुम्लाबाट आफूलाई अपहरण शैलीमा ल्याएको भन्दै केसीले राजधानी आएदेखि नै स्वास्थ्य जाँच गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
‘उहाँको स्वास्थ्य स्थिति क्रिटिकल (गम्भीर) भए पनि स्टेबल (स्थिर) छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट डा. प्रमेशसुन्दर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले कुनै जाँच गर्न दिनुभएको छैन । त्यसैले यकिन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’ उनले केसीमा छाती र मांसपेशी दुख्ने, चक्कर आउनेलगायत समस्या देखिएको बताए । ‘लामो अनशन र शरीरमा विभिन्न तत्त्वको कमीले यस्तो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । स्वास्थ्य जाँच गराउन नमानेका कारण चिकित्सकले उनको रगतमा पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियमलगायत इलेक्ट्रोलाइटको घटदो मात्राबारे कुनै जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहँदा नै उनको मुटुको चालमा गम्भीर गडबडी देखिएको त्यहाँका निर्देशक डा. पुजन रोकायाले बताए । ‘त्यतिबेला हामीले विज्ञसँग सम्पर्क गर्दा मुटुको यस्तो गडबडीले अनशन बसेका व्यक्तिको शरीरमा विभिन्न तत्त्वको कमी हुने भएकाले जोखिम रहेको बताएका थिए,’ उनले भने ।
आइतबार पनि वार्ता भएन
सरकार र डा. केसीबीच आइतबार पनि औपचारिक/अनौपचारिक वार्ता हुन सकेन । डा. केसीका प्रतिनिधि डा. अभिषेकराज सिंहले सरकारी पक्षबाट वार्ताका लागि कुनै पहल नभएको बताए । यसैबीच क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती, मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले आइतबार अनशनस्थल पुगेर केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
सबैभन्दा लामो अनशन
डा. केसीको यसपटकको आमरण अनशन सबभन्दा बढी दिनको हुने भएको छ । यसअघि उनी तेह्रौं अनशन २३ दिन बसेका थिए । उनको अनशन सोमबार २४ दिन पुग्दै छ ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ २०:४६
पत्ता लाग्यो नयाँ उन्यू
श्रावण ६, २०७५ चेतनाथ आचार्य
बेइजिङ — पेकिङ विश्वविद्यालयमा पोस्टडक गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक डा. नवल श्रेष्ठले पत्ता लगाएको उन्युको वैज्ञानिक नाम उनकै थरबाट राखिएको छ ।
श्रेष्ठले पत्ता लगाएको हुनाले नयाँ प्रजातिको वनस्पति (उन्यू) को नाम ‘हुपरजिया श्रेष्ठा’ राखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । पत्ता लगाउने व्यक्तिकै नाम या थरबाट नामकरण हुने पद्धतिअनुसार नयाँ प्रजातिको नाम राखिएको हो ।
कुनै प्रजातिको वैज्ञानिक नामकरण गर्न ल्याटिनीकरण गर्ने प्रचलन छ । जसले पत्ता लगाएको हो, त्यो प्रजातिको नाम राख्दा सम्बन्धित वैज्ञानिकको थरलाई ल्याटिनीकरण गरिन्छ । त्यही कारण उन्यूको नाम ‘श्रेष्ठा’ बनाइएको हो ।
आफ्नो नाममा नयाँ प्रजातिको उन्यू नामकरण हुँदा निकै खुसी लागेको श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालका केही वैज्ञानिकको नाममा मात्र वनस्पति नामकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘यस प्रकारको उपलब्धि मेरा लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि गौरवको कुरा हो ।’
यो नयाँ प्रजातिको उन्यू चीनका चच्याङ, फुचियान, क्वान्सीसहित म्यान्मार र भारतको आसाममा पनि पाइन्छ । खोज अनुसन्धान क्रममा उनले हुपरजिया नान्लिन्गेन्सिस चीनको हनान प्रान्तमा र हुपरजिया एसियाटिका नामक उन्यू चिलिन प्रान्तमा पत्ता लगाएका हुन् ।
उनको खोज तथा अनुसन्धानले चिनियाँ विश्वविद्यालयमा नेपाली वैज्ञानिकको उच्च क्षमता प्रदर्शन भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा चीनमा पीएचडी र पोस्टडक गर्न चाहने नेपाली वैज्ञानिकका लागि पनि सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
विराटनगरका श्रेष्ठले चीनको चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबाट वनस्पतिशास्त्रमा पीएचडी गरेका हुन् । उनी पीएचडी गर्न सन् २०११ मा चीन आएका थिए । सन् २०१४ मा पीएचडी सकेका उनले सन् २०१५ को जनवरीदेखि जुनसम्म पेकिङ विश्वविद्यालयको भिजिटिङ स्कलर्सका रूपमा काम गरे । सन् २०१५ को जुलाईदेखि सोही विश्वविद्यालयमा पोस्टडकमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
चीनमा पीएचडी गर्ने क्रममा उनले नेपालका हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटीको औषधीय गुण तथा प्रयोग विधिबारे पनि अनुसन्धान गरेका छन् । लोपोन्मुख जडीबुटीको पहिचान र तिनमा भविष्यमा पर्न सक्ने खतराबारे पनि उनले अनुसन्धान गरेका छन् ।
उनले गुराँस फूलको उत्पत्ति साढे ६ करोड वर्षअगाडि उत्तरपूर्वी एसियाको समशीतोष्ण जलवायु भएको उच्च भूभागमा भई कालान्तरमा दक्षिणपश्चिम चीन हुँदै हिमालय तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा फैलिएको तथ्यसमेत पत्ता लगाएका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ २०:२९
द्रुतमार्गको डीपीआर चाँडो स्वीकृत गर्न समितिको निर्देशन
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया सुरु
गाउँपालिकाले केन्द्रको कानुन खारेज गरी नियुक्त गरेका शिक्षकले तलब पाएनन्
मिडिया काउन्सिलको विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति
समझदारीबाट पछि हटे दुर्भाग्य : दाहाल
भाइरल ‘कुर्सी सलामी’ मेयरको स्पष्टोक्ति : 'अञ्जानमा गल्ती भो’